साइबर चौतारी: आफ्नो डोमेनमा ब्लगर (blogspot.com) को साईट कसरी होष्ट गर्ने
साधारणतया सबै डोमेन रजिष्ट्रारहरुको कन्ट्रोल प्यानलवाट लग ईन भएर डोमेन सेटिङ्गस चेन्ज गर्न सकिन्छ । ई-नेपाल मिडीया मार्फत खरिद गरेको डोमेनको कन्ट्रोल प्यानल वाट ब्लगस्पट डट कममा होष्ट भएको ब्लगमा कस्टम डोमेनमा कसरी होष्ट गर्ने तल दिएको छ ।
सब भन्दा पहिले डोमेन कन्ट्रोल प्यानलमा लगईन गर्नु पर्छ । कन्ट्रोल प्यानल लगईन गर्ने URL डोमेन रजिष्ट्राररै पिच्छे फरक हुन्छ । कन्ट्रोल प्यानलको URL तपाँईको डोमेन रजिष्ट्रर जसले गरि दिएको हो । उ सँग माग्न सक्नु हुन्छ ।
रजिष्ट्रार पिच्छे कन्ट्रोल प्यानलको लुक्स फरक भए नि त्यसमा प्रयोग भएका लिङ्कहरुको नाम र काम समान हुन्छन ।
डोमेन फर्वाड गर्न परेमा माथी दिएको लिङ्कमा क्लीक गर्नु पर्छ ।
DNS सेटिङ्गस परिवर्तन गर्न माथी देखाईएको लिङ्कमा क्लीक गर्नु होस ।
DNS क्लिक गरे पछी माथी दिए अनुसारको स्क्रीन देख्न सकिन्छ । तपाईको डोमेन रजिष्ट्रर गर्ने कम्पनीले उसको कम्पनीको लागी डीफल्ट नेम सर्भर जे राखेको छ करेन्ट नेम सर्भर त्यही देखिन्छ । तपाईको साईटलाई डोमेन कन्ट्रोल प्यानल बाट नै गुगल सर्भर प्वाईन्ट गर्नु पर्ने हुनाले त्यसो गर्न XXXXXXXXXX.orderbox-dns.com वाला नेम सर्भर एक्टीभेट गर्नु पर्दछ । यसको लागी Auto-update nameservers मा क्लिक गर्नु पर्दछ ।
डोमेन कन्ट्रोल प्यानलमा XXXXXXXXXX.orderbox-dns.com नेम सर्भर अपडेट भए पछी माथी देखिए अनुसार स्क्रीन देखिन्छ । त्यस पछी Manage DNS मा भन्ने बटन दबाउनु पर्छ ।
माथी तपाँईले Manage DNS मा क्लीक गेरे पछी देखिने स्क्रीन यही हो । यहाँ पहिले नै A Record ईन्ट्री भै सकेको छ । ब्लगरको साईटको लागि A Record राख्न माथी देखीएको Add A Record भन्ने बटनमा क्लीक गर्न पर्छ ।
यदी तपाँइको डोमेन www.yourdomain.com हो भने होष्टनेम खाली राखि दिए हुन्छ । हैन, सब डोमेनमा (e.g blog.yourdomain.com) बल्ग चलाउन चाहनु हुन्छ भने होष्ट नेममा सबडोमेन (e.g. blog) राख्नु पर्छ । ब्लगगर को साईटमा तपाँईले सबडोमेन (www बाहेक) जे राखी दिनु भएको छ यहाँ Host Name त्यही हुनु पर्छ । A Record चेन्ज गर्नको लागी तल दिए अनुसार IP Address हाल्नु पर्छ । TTL आफै 28800 लेखीएको हुन्छ त्यसलाई त्यसै छोडी दिए हुन्छ । ब्लगरको साईट चलाउनको लागी A Record अपडेट गर्दा राख्नु पर्ने IP Address हरु तल दिए अनुसार छन ।
माथी दिए अनुसार A Record अपडेट गरे पछी डोमेनको CNAME Record गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि माथी दिएको CNAME Record मा क्लीक गर्नु पर्छ ।
त्यस पछी माथी देखाए अनुसारको स्क्रीन देखा पर्दछ । यहाँ पहिले नै मैले CNAME सेट गरी सकेको छु । पहिले पटक हेर्दा खाली देखिन्छ र नयाँ CNAME रेकर्ड थप्नलाई माथी देखीएको Add CNAME Record मा क्लीक गर्नु पर्दछ ।
यहाँ CNAME Record अपडेट गर्नु पर्छ । माथी दिएको चित्रमा दिए अनुसार Host Name मा आफ्नो ब्लगको सब डोमेन लेख्नु पर्छ । यदी तपाईले आफ्नो डोमेनको URL www.yourdomain.com बनाउन चाहनु भएको भए Host Name मा www र Value मा रेडीयो बटनलाई तल झारेर ghs.google.com. लेख्नु पर्छ ।
यसरी कम्तीमा सब डोमेनको CNAME रेकर्ड मात्रै चेन्ज गरेर भए पनि ब्लगगरको साईटमा DNS म्यापिङ्ग गर्न सकिन्छ ।
ब्लगर (www.bogger.com/ www.blogspot.com)मै चाही Custom Domain कसरी सेट गर्ने ?
Setting मा गएर Publishing मा क्लीक गर्ने अनि Custom डोमेनमा क्लीक गर्ने
त्यसपछी Switched to Advanced Settings मा क्लीक गर्ने ।
यहाँ आफुले चाहेको URL दिने । उदारणको लागी यदी तपाँई आफ्नो साईटको डोमेन www.yourdomain.com वा yourdomain.com राख्न चाहनु हुन्छ भने Your Domain बनेको ठाँउमा www.yourdomain.com लेख्ने हैन तपाँईको Blog को URL blog.yourdomain.com राख्न चाहनु हुन्छ भने त्यही लेख्ने र माथी दिए अनुसारले डोमेन कन्ट्रोल प्यानलमा Blog सबडोमेनको CNAME रेकर्ड परिवर्तन गर्ने ।
Labels: ब्लगमेनिया, ब्लगर
Aakar Saturday, April 2, 2011 at 2:20:00 PM GMT+5:45
धन्यवाद ! यो जानकारी का लागि !
Bishnu Marasini Sunday, April 3, 2011 at 10:04:00 PM GMT+5:45
निकै उपयोगी जानकारीको लागि मुरी मुरी धन्यवाद ।
Unknown Friday, April 8, 2011 at 10:27:00 PM GMT+5:45
Thanks for the wonderful article. Very useful. :-)
Dinesh Bastola Friday, April 15, 2011 at 8:15:00 AM GMT+5:45
उपयोगी लेखका लागि धन्यवाद ।
Nepali Caricature Saturday, June 4, 2011 at 1:54:00 PM GMT+5:45
thanks la !!